एकैपटक १० वडामा माओवादी केन्द्रको पुरै प्यानल बिजयी, देशभर खुसियाली ! - jagritikhabar.com
एकैपटक १० वडामा माओवादी केन्द्रको पुरै प्यानल बिजयी, देशभर खुसियाली !
रुकुम पश्चिमको सानीभरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ नेकपा माओवादी केन्द्रको प्यानल नै विजयी भएको छ । भर्खरै सम्पन्न मतगणना अनुसार वडाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर पुन विजयी भएका छन् । उनले ५ सय ६१ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका खले पुनले २ सय ८१ मत प्राप्त गरे ।
उपाध्यक्षमा पुनले ५ सय ४७ मत ल्याउदा कांग्रेस एमाले गठबन्धनबाट एमालेका प्रकाश खड्काले १ सय ५७ मत ल्याएका छन् ।
सानीभेरी १ सँंगै रुकुम पश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रले जीतको सुरुवात गरेको छ । मुसीकोट नगरपालिकामा पनि मतगणना सुरु भएको छ । अन्य ४ वटा स्थानीय तहमा भने मत गणना सुरु हुन सकेको छैन् ।
२- कुमाख–१ को वडा अध्यक्षमा माओवादीका राना निर्वाचित
हुम्लाको ताजाँकोट १ मा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार विजयी भएको छ । अध्यक्षसहित पुरै प्यानल विजयी भएको हो । पालिकामा माओवादी केन्द्रले सुरूवाती अग्रता लिएको छ । दुई वडाको मतगणना हुँदा माओवादीले अग्रता लिएको हाे ।
४ सय ५७ मत गणना गर्दा अध्यक्ष लालकेश जैशी २सय ३७ मत पाएका छन् भने एमालेका अजमल बुढा १ सय ६१ मत प्राप्त गरेका छन् । १ सय ६ मतले माओवादी केन्द्र लालकेशको अग्रता छ ।
५- राप्ती गाउँपालिका – ९ मा माओवादीका मगर विजयी
दाङ — स्थानीय तहको शुक्रबार भएको निर्वाचन अन्तर्गत दाङमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वडामा विजयी सुरुआत गरेको छ । राप्ती गाउँपालिका – ९ मा माओवादीका उम्मेदवार रिमबहादुर सुनारी मगर विजयी भएका छन् ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ९ मा ७१४ मत खसेकामा मगरले ३ सय ५८ मत प्राप्त गरेका थिए ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका रमेश चुहानले १ सय ९८ मत प्राप्त गरेका थिए । उनी यसअघि पनि सोही वडामा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । राप्तीमा माओवादी र जनमोर्चाले गठबन्धन गरेका थिए ।
६- सल्यानको खुमाख गापा ७ मा पनि माओवादी केन्द्रको पुरै प्यानल बिजयी
कुमाख गाउँपालिकाको दोस्रो मतपरिणाम पनि माओवादी केन्द्रको पक्षमा:
काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनलाई तोद्डै नेकपा(माओवादी केन्द्र) का ७ नम्बर वडाध्यक्ष डम्बर शाही सहितको पुरै प्यानल विजयी भएको छ। हार्दिक बधाई एवं शुभकामना ! रमेश मल्ल, प्रचण्ड स्वकीय सचिवको फेसबुक बाट ।
७ – रोल्पाको थबाङ बागा ५ मा माओवादीको पुरै प्यानल बिजयी
जनयुद्वको लालकिल्ला रोल्पा थवाङले खाता खोल्यो । थवाङ गाउँपालिका वडा नं ५ मा काङ्ग्रेस,एमाले र विप्लव नेकपा गठबन्धनलाई हराउँदै भारीमतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार गोबर्धन घर्ती मगर प्यानल सहित विजयी ।हार्दिक बधाई ।
किरण रम्बाको फेशबुक बाट साभार । ८- भोजपुर नपा १ मा पनि माओवादी बिजयी
खाता खोलियो !
बधाई जीरामणि राई र सबै टिम लाई साथै सबै वडावासी मतदाता नागरिकहरुलाई धन्यवाद !
वडा अध्यक्ष भोजपुर नगरपालिका – १
नेकपा (माओवादी केन्द्र) किरण रम्बाको फेशबुक वालबाट साभार ।
९- अपिहिमाल- ६ अध्यक्षमा माओवादीका धामी विजयी
अपिहिमाल गाउँपालिका- ६ मा गठबन्धनका धनसिंह धामीसहितको प्यानल विजयी भएको छ । धामी तीन सय ६५ मतसहित विजयी भएका हुन् । उनी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार थिए । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का गामसिंह धामीले दुई सय ४८ मत ल्याएका थिए । गामसिंह धामी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाअध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
त्यस्तै, अपिहिमाल गाउँपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का भगतसिंह ठेकरे बोहोराले ५ सय ८५ मत ल्याएका छन् । एमालेका धर्मानन्द मन्यालले ३ सय ४४मत ल्याएका छन् । मन्याल २०७४ सालको निर्वाचनमा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
अपिहिमाल गाउँपालिका १ को अध्यक्षमा पनि गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा गठबन्धनका पोखरसिंह लोथ्यालसहितको प्यानल विजयी भएका थिए ।उनी कांग्रेसका तर्फबाट गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका थिए ।
१०- अछामका दुई वडामा कांग्रेस र माओवादी विजयी
रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर १ मलातीकोटमा माओवादीका चक्र साउदको प्यानलै विजयी भयाे भने कमलबजार नगरपालिका वडा नम्बर १० मा कांग्रेसका भिमबहादुर बिष्ट विजयी भएका छन्
अछाम जिल्लामा वडा तहको मतपरिणाम आउन सुरु भएको छ । अहिलेसम्म एउटा वडामा नेकपा माओवादी केन्द्र र एउटामा कांग्रेसले विजयी हासिल गरेको छ ।
जिल्लाको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर १ मलातीकोटमा माओवादीका चक्र साउदको प्यानलै विजयी भएको छ । साउदले ५ सय १९ मत पाएका छन् । कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको गठबन्धनले वडाध्यक्षमा १ सय ६८ र एमालेका उम्मेदवारले ८० मतका साथ पराजय भएका छन् ।
सो वडामा माओवादीकै नरराज खनाल, लाली भण्डारी, डम्बरा साउद र जमुना विक सदस्यमा विजयी भएका छन् । यो वडाबाट गाउँपालिका अध्यक्ष पदकालागि नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ५ सय १० र उपाध्यक्षलाई ४ सय ५९ मत प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी कमलबजार नगरपालिका वडा नम्बर १० मा कांग्रेसका भिमबहादुर बिष्ट विजयी भएका छन् । उनले ४ सय ५२ मत ल्याएका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेदवारले ३ सय ४६ मत ल्याएर पराजित भए । अछाममा मतगणना भइरहेका दुई गाउँपालिका र एक नगरपालिका मध्ये कमलबजार नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिमा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ भने रामारोशन गाउँपालिकामा माओवादीको अग्रता छ ।
जिल्लाको मंगलसेन नगरपालिका, ढकारी गाउँपालिका लगायतका केहि स्थानीय तहमा पनि मतगणनाको तयारी भइरहेको छ ।